Maitiro Ekudzivirira uye Kurerutsa Allergic Rhinitis Zviratidzo muVana | Bezzia
Maitiro Ekudzivirira uye Kurerutsa Allergic Rhinitis Zviratidzo muVana
Maria Jose Roldan | 26/03/2021 22:00 | Mazano amai
Nekusvika kwechirimo, kune akawanda makesi eanorwara anoitika mune yakakura chikamu chevanhu. Panyaya yevana, inonyanya kuzivikanwa seanorgic rhinitis.
Iyi yekufema mamiriro inotsamwisa kune idiki imba yacho nekuti inokonzeresa kuzara kwakasimba mumhino pamwe nekukosha kumeso. Muchinyorwa chinotevera tinokuratidza akateedzana matipi anogona kubatsira kudzikisira zviratidzo izvi.
1 Ndezvipi zviratidzo zveiergic rhinitis muvana?
2 Nzira yekudzivirira sei zviratidzo zveyeergic rhinitis
3 Maitiro ekurerutsa zviratidzo zveyeergic rhinitis
Ndezvipi zviratidzo zveiergic rhinitis muvana?
Kuvapo kwemukume mune zvakatipoteredza ndicho chikonzero chikuru cheanorgic rhinitis muvana. Allergy iyi inokonzeresa kubvarura uye kutsamwisa mumaziso pamwechete nehuwandu hwakawanda hwemamhuno mumhino uye kumwe kunhuwa pahuro. Iwo akateedzana ezviratidzo ayo anotsamwisa kune vadiki, nokudaro kukosha kwekudzivirira uye kurerutsa.
Nzira yekudzivirira sei zviratidzo zveyeergic rhinitis
Zvakakosha kuchengetedza nharaunda iri mumba yakachena uye yakachena sezvinobvira saka zvakakosha kuchenesa imba yese nguva dzose.
Iwe unofanirwa kudzivirira kuva nezvirimwa zvinogadzira mukume uye mhuka dzinorasikirwa nevhudzi rakawanda.
Imba yemwana inofanirwa kuve nemhepo mazuva ese uye kuwacha zvekufuga kamwe pavhiki.
Dzivisa madhiri mukati meimba uye nzvimbo dzine guruva rakawandisa.
Zvakakosha kugeza maoko emwana wako kakawanda pazuva, kunyanya kana anga achitamba mumugwagwa.
Kudya kwakanaka kwakakosha kana zvasvika pakudzivirira zviratidzo zveanergic rhinitis. Kudya kwacho kunofanirwa kuve kwakapfuma mumichero nemiriwo ine hupfumi hwevitamin C. Kudya kwe folic acid kwakakosha kudzivirira zvinogona kuitika zviratidzo zvinokonzerwa nean allergy.
Maitiro ekurerutsa zviratidzo zveyeergic rhinitis
Zvinodhaka kana mishonga yakakosha kana zvasvika pakuderedza zviratidzo. Ose antihistamines uye corticosteroids inofanirwa kupihwa nemushonga.
Kunze kwemishonga yakadaro, Iwe unogona kutora kucherechedzwa kwakanaka kweakateedzana matipi ayo anobatsira kudzikamisa izvo zvambotaurwa zviratidzo:
Chenesa uye geza nemhino dzemwana zvakanaka uchibatsirwa nesaline solution.
Simudza machira kubva pamubhedha kudzivirira mamora kubva mukuungana mumhino.
Uchishandisa humidifier mumba zvakakosha kana zvasvika pakuwana nzvimbo ine hunyoro.
Kunwa mijenya yemvura kunobatsira kuyerera kwenyoro uye hauna mhino yakawandisa.
Chenesa maziso ine gauze uye mhinduro shoma yemunyu.
Muchidimbu, nekusvika kwechirimo, allergic rhinitis yakajairika muvana, kuva zviratidzo zvekutaura kweanogumbuka ivo vanogumbura uye kusagadzikana. Zvakakosha kuti vabereki vatore matanho ese ekudzivirira kuitira kuti mwana ararame hupenyu hwakagarika nepazvinogona uye kuti isakuvadzwe nezvataurwa pamusoro apa zveoreginal rhinitis.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Mazano amai » Maitiro Ekudzivirira uye Kurerutsa Allergic Rhinitis Zviratidzo muVana
Chii chinonzi tsoka yezvakatipoteredza uye kuti ungadzikise sei